जयबहादुर चन्दसहित ११ जना एआइजीमा सिफारिस, नवराज सिलवाल डिआइजीमै सिमित !
३१ असार काठमाडौं । सरकारले ११ जना डिआइजीलाई एआइजीमा बढुवा सिफारिस गरेको छ । नेपाल प्रहरी एआईजी पदमा डीआईजी जयबहादुर चन्दसहित ११ जना बढुवा सिफारिश भएपनि आइजिपीका लागि दाबी गर्दे सर्वोच्च अदालतमा पुगेका डिआइजी नवराज सिलवाल भने सिफारिसमा परिेनन् । गृहमन्त्रालय अन्तर्गतको बढुवा समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले ११ जना डीआईजीलाई एआईजीमा बढुवा सिफारिश गरेको हो । फारिशमा यसअघि आईजीको दाबी गर्दै सर्वोच्च पुगेका नवराज सिलवाल…विस्तृत समाचार »
​राजधानीमा जारी फोटोप्रदर्शनी : यसरी जोखिम मोलेर तस्विर कैद गर्छन् फोटोग्राफर (फोटोफिचर)
३१ असार काठमाडौ । राजधानीमा शुक्रबारदेखि फोटोप्रदशनी जारी छ । फोटोजर्नालिस्ट क्लबको आयोजना तथा इन्टरनेशनल मिडीया सपोर्टको सहयोगमा पत्रकार र शुरक्षा बिषयमा आयोजित फोटो प्रदर्शनी सभामुख ओनसरी घर्ती मगरले उद्घाटन गरेकी थिइन् । सभामुखले फोटोखिच्न लागेका फोटोपत्रकारले नै खिचेका तस्विर सार्वजनिक गरेर उद्घाटनत गरेकी थिइन् । हेरौँ सभामुख घर्तीले सार्बजनिक गरेका केही तस्विरहजोखिम मोलेर त।स्विर कैद गएिका तस्विरहरू । फोटोपत्रकारले कसरी जोखिम मोलेर तस्विर खिच्छन् भन्ने…विस्तृत समाचार »
राज्यले शरीर अपाङ्ग बनायो विद्रोहीले मन कुँढ्याए, मेरा लागि राज्यसँग मृत्यु मागिदेऊ
राजु ढकाल ३१ असार काठमाडौ ।१० वर्षे सशस्त्र युद्धकालमा राज्यपक्ष र विद्रोही पक्षबाट कति मारिए ? कति घाईते भए ? कति अंगभंग भए ? त्यसको एकिन तथ्याङ राज्यसँग अहिले पनि छैन । युद्ध पीडितका नाममा अर्बौ रुपैंया राज्यकोषवाट खर्च पनि भइसक्यो । तर युद्धकालका थुप्रै पीडित अहिले पनि राज्यको सहयोगवाट विमुख छन् । उनीहरु सहयोगका लागि हारगुहार गरिरहेका छन् । तर त्यो आवाज सम्बन्धित ठाउँमा…विस्तृत समाचार »
यस्ता छन् सत्ताको शिखरबाट जमिनमा धुलो चाट्न पुगेका शासकहरुको कथा
विश्वका धेरै शासनसत्ताहरुको उत्थान र पतन भएको छ । कति आन्तरिक कारणले सत्ता ढलेको छ भने कतिपय मुलुकमा बाह्या आक्रमणका कारण शासनसत्ता ढलेको छ । माओवादीले सुरु गरेको दशक लामो जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनले नेपालबाट २४० वर्ष लामो शाहवंशीय शासन अन्त्य भयो । अहिले मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा अघि बढ्ने प्रयासमा छ । नेपालमा शाहवंशको अन्त्य भएजस्तै विश्वका धेरै मुलुकमा विभिन्न कारणले शासकहरुको पतन…विस्तृत समाचार »
परिस्थिति र मान्छे : परिस्थितिले बनेको चोरसँगको अचम्मको नाता
यशु श्रेष्ठ आज अफिसमा धेरै रातिसम्म काम गरियो । नारायणजी र म भएर २–३ दिनदेखिको काम आजै सिध्यायौं । यसो घडी हेरेको त रात गै पो सकेछ । घर पनि निक्कै टाढा । फेरि राति हिंड्ने समय पनि छैन सत्यालजी भन्दै नारायणजीले भन्नुभयो । अफिस वरपर त्यस्तो बस्न लायकका घरहरू पनि छैनन् । दिउँसो खेतमा काम गरेर थकाई मार्न बनाएका झुप्राहरू छन् । हामी पनि…विस्तृत समाचार »
बहुमत नजुटेसम्म संशोधन प्रक्रिया अगाडी नबढ्ने, राजपाको अडान कायमै
३१ असार, काठमाडौ । संविधान संशोधनको पक्षमा स्पष्ट दुई तिहाई बहूमत नपुग्दासम्म संविधान सशसोधनको प्रक्रिया अगाडी नबढ्ने भएको छ । सरकारले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडी बढाउन आनकानी गरिरहेको भन्दै राजपाले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका बेला सरकार भने बहुमत जुटाउने कसरतमा लागेको हो । श्रममन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरल संशोधन प्रस्ताव पारित गराउन दुई तिहाई बहुमत जुटाउने प्रयासमा सरकार रहेको जानकारी दिंदै दुई तिहाई बहुमत नजुटेसम्म प्रस्ताव अघि नबढ्ने…विस्तृत समाचार »
कहिले बन्छ धरहरा ? निर्णय र योजनामा मात्र सीमित धरहरा पुनर्निर्माण
नेपालको राजधानी काठमाडौं छिर्ने वित्तिकै सबैभन्दा पहिलो नजर पुग्ने गथ्र्यो, सुन्धरास्थित धरहरामा । विश्वबजारमा काठमाडौंलाई चिनाउने यौटा माध्यम बनेको थियो धरहरा । विदेशी पर्यटकलाई काठमाडौंमा आकर्षित गर्न बिकाउने गतिलो फोटो बनेको धरहरा । नेपालका पहिलो प्रधानमन्त्री भिमसेन थापाले बनाएको त्यही धरहरा । काठमाडौंका लागि जीवित स्तम्भ जस्तै बनेको थियो धरहरा । विक्रम संवत् १९९० सालको महाभुकम्पले ध्वस्तबनाएको धरहरा केहीवर्षभित्रै पुनर्निर्माण भयो । राणा प्रधानमन्त्रीले कमसेकमकुलको…विस्तृत समाचार »
३१ असार, काठमाडौ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत गाली गलौज गरेको आरोपमा दुई व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो । उनीहरूले राष्ट्रपति भण्डारीलाई अश्लील शब्द प्रयोग गरी फेसबुकमा स्टाटस पोस्ट गरेका थिए । पक्राउ परेका उनीहरूको आइडी सक्कली थियो, त्यसैले प्रहरीलाई पक्राउ गर्न गाह्रो भएन । तर, नक्कली आइडी बनाएर उनले गाली गलौज गरेको भए प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन गाह्रो पर्ने थियो । त्यसका दुईवटा कारण…विस्तृत समाचार »
स्थानीय तहको अधिकार कटौती एमालेलाई मान्य हुँदैन : एमाले अध्यक्ष ओली
असार ३०, भक्तपुर । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार सरकारले कटौती गर्न लागेको आरोप लगाएका छन् । सूर्यविनायक नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको प्रथम नगरसभाको उद्द्दघाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार सरकारले कटौती गरे एमालेलाई मान्य नहुने बताए । उनले संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार सरकारले कटौती गर्न खोज्नु गलत भएको टिप्पणी गरे । ओलीले संविधान निर्माण गर्दा संविधानमै उल्लेख…विस्तृत समाचार »
‹ First Newer 941 942 943 944 945 Older Last ›